Showing posts with the label शिक्षा नेपाल
अनन्तकुमार लाल दास बालबालिकाहरूमा पाइने कौतूहलता र जिज्ञासा दुई यस्ता प्रवृत्ति हुन्, जसलाई रोकियो भने उनीहरू कुँवाको भ्यागुतो सरह बन्न पुग्छन्। यस्ता बालबालिकाहरूको परिचय क्षेत्र सीमित र सङ्कुचित भएर मानसिक सोच पनि पङ्गु र अधूरो हुन्छ। यस्ता बालबालिकाहरू किताबी ज्ञानको दृष्टिकोणले बी.ए., एम.ए.को डिग्री हासिल गरे तापनि सामाजिक र व्यावहारिक जीवनमा पछाडि नै रहन्छन् र विषम परिस्थितिको सामना गर्न सक्षम हुँदैनन्। यस्ता केटाकेटीहरू किताबी कीरा बनेर विद्यालयको परीक्षा राम्ररी उत्तीर्ण गर्न सफल भए पनि जीवनको परीक्षामा अपवादबाहेक नराम्ररी फेल हुन्छन्। यसरी प्राप्त भएको असफलता र व्यावहारिक ज्ञानको कमी नै जीवनमा उसलाई कहिल्यै अगाडि बढ्न दिंदैन। अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा जीवनभरि हीनताबोधको शिकार भई भाग्य र अरूलाई दोष दिइराखेका कैयौं उदाहरण हाम्रै समाजमा विद्यमान छ। छिमेक वा आफ्नै देशबारे जान्ने इच्छा, त्यसलाई प्रत्यक्ष हेर्ने जिज्ञासा हरेक केटाकेटीको मनमा स्वस्फूर्त उत्पन्न हुन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने छिमेक वा देशको प्रत्यक्ष दर्शन गरेर उनीहरू जति खुश हुन्छन् त्यतिकै बौद्धिकरूपले प्रसन्न, सन्तुष्ट र च
अनन्तकुमार लाल दास रमेश धेरै ज्ञानी विद्यार्थी हो। ऊ सधैं कक्षामा राम्रो गर्दै आएको थियो तर कक्षा नौमा आइपुग्दा उसको परीक्षाफल बिग्रन थाल्यो। यसबाट रमेश मात्र हैन, उसका आमाबुवा, शिक्षक तथा साथीहरूलाई पनि धेरै आश्चर्य लागिरहेको थियो। आखिर रमेशको परीक्षाफल किन बिग्रियो ? यसबारे कसैले बुझ्न सकिरहेको थिएन। वास्तविकता त के हो भने उसको जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय नजीक आइसकेको छ। अर्थात् उसको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा नजीक आउँदै छ। यस स्थितिमा उसको परीक्षफललाई लिएर सबै चिन्तित थिए। चिन्तित हुनु स्वाभाविक नै हो। आखिर रमेशको परीक्षाफल किन बिग्रियो ? के तपाईंले केही अनुमान लगाउनुभएको छ ? वास्तवमा रमेश जहिले पनि पढ्न बस्छ, उसको मनभित्र अनेकौं कुरा उठ्न थाल्छन्। ऊ कहिल्यै विद्यालयसँग जोडिएको कुरा सोच्न थाल्छ भने कहिल्यै उसलाई नयाँ भिडियो गेमको सम्झना आउँछ। कहिल्यै फेसबूक हेरेर त्यसमा कमेन्ट लेख्छ त कहिल्यै ह्वाट्स एपमा साथीहरूसँग गप्प हाँक्न लम्कन्छ। कहिल्यै टेलिभिजनमा प्रसारण हुने थरीथरीको कार्यक्रमको सम्झना हुन्छ त कहिल्यै साथीहरूको लहलहैमा मन नलागे पनि घुम्न निस्किन्छ। यसरी रमेश चाहँदा नचाहँदै
अनन्तकुमार लाल दास आज राष्ट्र नेतृत्वविहीन भएको छ। जताततै यसकै चर्चा भइरहेको छ। आज संस्था होस् वा समुदाय, जुनसुकै क्षेत्रलाई गति दिनका लागि, दिशा प्रदान गर्नका लागि प्रभावकारी नेतृत्व चाहिन्छ। नेतृत्वको अभावमा एउटा परिवार सुखी र सम्पन्न हुन सक्दैन। एउटा समाज रचनात्मक दिशामा लम्कन सक्दैन। एउटा राष्ट्र अग्रगामी बाटोमा हिंड्न सक्दैन अर्थात् समग्र विकासका लागि कुशल नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ। यस अर्थमा परिवर्तनका लागि आत्मविश्वासले भरिएको इमानदार, प्रतिबद्ध, धैर्यशील, पारदर्शी, सकारात्मक दृष्टिकोण भएको, जिम्मेवारीलाई व्यक्त गर्ने क्षमता भएको नेतृत्व चाहिन्छ। सामान्य शब्दमा भन्ने हो भने नेतृत्वको अर्थ कुनै व्यक्तिविशेषका त्यस्ता गुणसँग हुन्छ, जसको माध्यमले उसले अन्य व्यक्तिहरूको मार्गदर्शन गर्दछ। अर्थात् नेतृत्व भनेको साधन हो। साधन उत्तम भयो भने बाटोमा हिंडेर गन्तव्यसम्म सजिलै पुग्न सकिन्छ। नेतृत्वको अभाव भनेको भीड हो। अन्योलता हो। अराजकता हो र हो दिशाहीनता पनि हो। त्यसैले प्रत्येक एकाइमा नेतृत्वको संस्थापन गरिएको पाइन्छ। राज्यको उत्पत्तिसँगै नेतृत्वको संस्थापन भएको इतिहास पाइन्छ। यो स्वतः वि
अनन्तकुमार लाल दास आज नेपाली समाज विकृतिको घर बनेको छ। यी विकृतिहरूले गर्दा नै समाजबाट मानवीय संवेदना लुप्त भइरहेको छ। समय परिवर्तन भयो, देशको स्थितिमा बदलाव आयो, हामीले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना ग–यौं तर पनि हाम्रो सामाजिक विसङ्गति जस्ताको त्यस्तै छ। यी विकृतिहरूमध्ये केही पाश्चात्य संस्कृति र मोबाइलको देन हो भने केही हाम्रै समाजका स्वार्थी मानिसहरूको देन हो। एउटा कालखण्डमा हाम्रो देश शान्तिको प्रतीक थियो भने आज सर्वत्र अशान्तिको कुहिरो लागेको छ। एकातिर कोरोनाको कहर अझै विद्यमान छ भने अर्कोतिर समाजको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको छ। समाजको सबैभन्दा ठूलो समस्या महिलाहरूको रहेको छ। हुनत नेपालको संविधानले महिला शक्तीकरण वा विकासको लागि मौलिक हक तथा अन्य संवैधानिक प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ तर यो केवल नाम मात्रको छ। आज पनि लोग्नेको चाहना नै स्वास्नीको लागि सबै थोक हो। लोग्नेको दुराचार, अन्याय र अत्याचारलाई मूक पशुझैं सहन गर्नु उसको बाध्यता हो। महिलाको संसार पर्खालभित्र मात्र सीमित छ। पति देउताको सेवा गर्नु र सन्तान हुर्काउनुमात्र उसको काम हो। घरमा बसेर कहिले
अनन्तकुमार लाल दास विद्यार्थीहरूमा ज्ञान र भावनात्मक कुशलताको विकास गर्ने कार्य शिक्षाको हो। विद्यार्थीहरूलाई भावी जीवनमा आउने चुनौतीहरूको सामना गर्नको लागि जीवनोपयोगी सीपसँग सुसज्जित गर्ने कार्य पनि शिक्षाको नै हो। विद्यार्थीहरूलाई एउटा सार्थक व्यक्तिगत जीवन सँगसँगै कामकाजी जीवनको लागि तयार गर्ने काम पनि शिक्षाको नै हो। तर दुर्भाग्यवश शिक्षाको वर्तमान अवधारणामा विद्यार्थीहरूको समग्र विकासको साटो जानकारी वा सूचना मात्र दिने काम भइरहेको छ। हुन त विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमताको सक्दो उपयोग गरेर आत्मविश्वासका साथ चुनौतीहरूको सामना गर्न प्रशिक्षित गर्नुपर्छ, तर वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा यस कुरामाथि यथेष्ट ध्यान दिइएको छैन। विद्यार्थीहरू जसैजसै ठूलो हुँदै जान्छन् हेरेर, सुनेर, स्वयं आफ्नो अनुभवको विश्लेषण गरेर र आफ्नो वरिपरिको वातावरणको अवलोकन गरेर धेरै हदसम्म विभिन्न प्रकारका जीवनोपयोगी सीपहरू सिक्दै जान्छन्। दुर्भाग्यवश बौद्धिकरूपले विकलाङ्ग केटाकेटीमा यस्तो जीवनोपयोगी सीपको अभाव हुन्छ। उनीहरूको लागि चाहिने सीपको प्रशिक्षणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ। यसको लागि ठीक समयमा शा